Shahaadada Cadastar-cadaynta ee caddaynta ee CAD / GIS - Geofumadas
Luulyo, 2015 cadastre, Microstation-Bentley
Bixinta shahaadada hantida ee waqtiga ugu fiicani waa mid muhiim u ah bixinta adeegga ka jira aagga Cadastre, waa la shaqeyn karaa iyada oo aan loo baahnayn dadaal badan, hubinta waxtarka iyo hoos u dhigida qaladka dadka.
Markii hore, markii aan la shaqeynay degmooyinka, markii uu qofku codsaday shahaadada iyo shahaadada cadawga, badh ka mid ah shaqada ayaa kormeer iyo cabir ka sameeyay goobta; inta kale waxay ahayd inay ka shaqeeyaan khariidada oo ay la dagaallamaan sheybaarada miisaanka si loo hubiyo in shahaadada ay runta u haysay xogta ku jirta diiwaanka.
Dabcan, haddii dalabka waa yar yahay, saacadaha qaatay ee degsado xogta, dhaansado, la ansixiyey ka dhanka ah maps jira, la abuuro sanduuqa tilmaamaha, masaafada iyo qiyaasta template qiil subaxdii of farsamo ah oo sida daawashada cajaladaha on Youtube. Hase yeeshe, Agaasimaha Cadastaliga oo lagu daro Diiwaangelinta, kaas oo heli doona codsiyo badan oo loogu talagalay shuruudaha sharciga ah wakhtiga feylka, ma awoodid inaad samayso gacanta.
Tani waa tusaale, oo aan daabacno si aan u muujinno dadaalka bani'aadamnimada dhawr saacadood oo maal gashiga ah oo lagu maalgelinayo codsi kaas oo damaanad qaadaya in shahaadada la soo saaro wax ka yar saacadaha 30.
Sahayda la heli karo.
Macluumaadka sawirada waxaa lagu kaydiyaa xogta Oracle Spatial.
Sawirrada waxaa loo adeegsadaa iyada oo loo marayo "ArcGIS Server WMS".
Qalabka macmiilka ee ay isticmaalaan waa BentleyMap, Codsi Microstation ah oo loogu talagalay.
Sida aad arki karto, xaalada dhabta ahi waa ruqsadda macaamiisha ah, laakiin markaad la shaqeyso hay'adaha dawliga ah waa inaad isticmaashaa waxa jira, haddii aadan awood u lahayn inaad u socotid isdhexgalka OpenSource. Qaar kale waxay sidan u samayn karaan codsiyada kale, kiiskeennu waa inaanu u qabanno waxa jirey.
Macluumaadka codsaday codsiga
Visual Basic for Aplicatiosn (VBA) ayaa loo adeegsaday horumarinta. Inkasta oo aaladda aan horey u sameynay Microstation Geographics, samaynta isbedel ayaa macnaheedu yahay in la fududeeyo wax badan oo ka mid ah duruufaha hore loo sameeyay faylasha DGN, raadinta fulin deg deg ah, ka faa'iideysiga hawlaha cusub ee la heli karo.
Foomku wuxuu codsadaa xog ku saabsan hal meelayn:
Qodobka cadawga, oo leh maskax lagu habeeyey qaabka. Xaaladdan oo kale, koodhka waaxda, lambarka degmada, qaybta iyo lambarka hantida.
Waxay u ogolaataa ikhtiyaarka ah in shahaadada uu keeno magacyada milkiilayaasha, koodhka cadadka ama lambarrada beeraha ee qaybta hoose ee dhismaha.
Waxaa lagu siin karaa ikhtiyaarka inaad sawirada asalka ah ka soo qaadato adeega WMS.
Waxaad dooran kartaa inaad haysatid hanti loo yaqaan 'fill'.
Sida miisaanka, codsiga baadhaa ku adag in guriga lagu daray kala duwan oo dheeraad ah, haddii sabab qaar ka mid ah si aad u dhagan la siin karaa fursad u helaan ka dib markii arrimo qiyaasta 125x ah.
Ugu dambeyntii waxaad heysataa beer aad ku dari karto indha-indheynta iyo barmaamijka horumarka.
Marka geedi socodka la fuliyo, codsigu wuxuu sameeyaa habka loo isticmaalo isticmaale ahaan:
Wuxuu isku xiraa Oral Spadial, oo raadinaya hantida la xulay furaha la doortay.
Qaadataa kala duwan oo xog ah ee shayga (x, y ugu yaraan iyo ugu badnaan) ah, taas ku darayaa boqolkiiba ah hantida ma ka soo baxay qaabka, iyo dhammaan guryaha in dhowr yaalana by Rubuca la keenay.
Kadibna, codsigu wuxuu abuuraa qaab, gooyo sanduuqa iyo gelinta template oo horayba u haysta moduleka iyo logos.
Laga soo bilaabo diiwaanka macluumaadka milkiilaha, cinwaanka, aagga xisaabinta, iwm.
Adeegga shabakadda wuxuu isticmaalayaa lambarka bar / QR code.
Iyo bogga soo socda wuxuu abuuraa iskudhafyada, tilmaamahooda iyo masaafad ahaan sida userka ay ula macaamili lahayd CivilCAD ama Civil3D.
Miyuu ahaa nidaamka Meelaynta Micrahaarka fududeynaya?
Shaki la'aan, in kastoo fududayntu ay wax badan ka muuqato dhinacyo kale marka loo eego jiilka shahaadada. Laakiin inta u dhaxaysa faa'idada, waxaa la sheegi karaa:
Falanqaynta hore ee figradaha waxay ahayd mid aad u caan ah, maaddaama guryaha ay hadda ku jiraan xaalad aan caadi aheyn, weydiinta waa mid aad u qoto dheer; ka hor inta aan si loo hubiyo kuwaas oo keeni maps jirka ka weydiin da'ayeen index ah (taas oo ahayd DGN kale) maldahan seconds qiimo leh oo ka badan sidii halista ah ee map xadka ay is badaleen oo aan cusbooneysiin index ah.
Sida loogu yeero macnaha naqshadeyntu Geographics ma taagnaan ka hor inta adeegyada imaging, taas oo lagama maarmaan ahayd inuu u soo yeedho images tixraaca xitaa haddii ay ahaayeen in format .ECW iftiinka, in la sameeyo meel fog culus oo hakin kala iibsiga. Hadda oo leh WMS, kaliya oo loo diro ayaa loo yaqaan adeeg, ma aha sida faylal jireed.
Markaas cabbirka qoraalka ayaa faa'iido leh, sababtoo ah ka hor intaanay ahayd qoraalka sida faahfaahin. Maanta waa la adeegsan karaa, si loo abuuro xeerar isku xirnaanta xajmiga hantida, iyo sidoo kale qaab kasta oo qaabab kala duwan oo lagu qeexi karo XML ee Buugga Tilmaamaha, oo aan lagama maarmaanka u ah template.
Fiidiyow ku lifaaqan ayaa muujinaya sida codsiga loo fulinayo.
Hawsha u yimaado jirsado ilaa xiiso leh hindise aan u taageeraya in isku midka ah, waayo, kaasu Samee ka QGIS plugin aan si toos ah uga soo Oracle laakiin via WFS adeegay GeoServer, fekerayo ma aha oo kaliya in ayna ka adeega, laakiin maxaa yeelay, ma dhammaan Degmooyinku waxay haystaan ​​liisanka BentleyMap.
Post Previous«Previous 25,000 dunida oo dhan maps diyaar u download
Post Next dhiirigelin qaali ah oo gvSIG - Challenge Award YurubNext »